အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု စနစ် (PR) အား ကန့်ကွက် ခဲ့သည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် မိမြင့်သန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
“PR စနစ် ဆိုရင် အသစ် ပြန်ရှင်းပြ ပေးရမယ်၊ ဒီမိုကရေစီ ရင့်ကျက် လာမယ် ဆိုရင် ဘယ်စနစ်ပဲ သုံးသုံးပေါ့”
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီက တင်သွင်း လာခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ များတွင် အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု (PR) စနစ် ကျင့်သုံးရန် အဆိုကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် နို၀င်ဘာလ ၁၄ ရက်က မဲခွဲ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ရာတွင် လက်ရှိ ကျင့်သုံး နေသည့် နိုင်သူ အကုန်ယူ စနစ် ကိုသာ ဆက်လက် ကျင့်သုံးရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့သည်။ လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် PR စနစ်ကို ကန့်ကွက် ခဲ့သည့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ မွန်ဒီမိုကရေစီ ပါတီ၏ မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် မဲဆန္ဒ နယ်မြေမှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် မိမြင့်သန်းနှင့် ရွှေဟင်္သာ သတင်း ဌာနမှ သွားရောက် တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ချက်အား ကောက်နှုတ် တင်ပြ အပ်ပါသည်။
မေး ။ ။ ရွေးကောက် ပွဲမှာ လက်ရှိ ကျင့်သုံး နေတဲ့ မဲများသူ အနိုင်ယူသည့် စနစ် FPTP စနစ်နဲ့ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု PR စနစ်နဲ့ ဘယ်လို ကွာခြားမှု ရှိမလဲ ?
ဖြေ။ ။FPTP စနစ်က (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းထက် တစ်မဲထက် ပိုရင် မဲနိုင်တယ်။ ပီအာ စနစ်က ဥပမာ ပါတီ A နဲ့ ပါတီ B ရှိမယ်။ အဲဒီ ထဲက တချို့က ပါတီ A က (၅၁) ရရင် အမတ် နေရာ နိုင်တယ်၊ ပါတီ B ပေးတဲ့သူ ကျတော့ (၄၉) ရာခိုင်နှုန်းပဲ မဲပေး ထားတဲ့ သူတွေက မဲအခွင့် အရေး ဆုံးရှုံး သွားနိုင်တယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ FPTP စနစ်ကို (၇) ကြိမ်မြောက် ကျင့်သုံး ခဲ့တယ်။
မေး။ ။အခု လွှတ်တော်ထဲမှာ လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေတဲ့ နိုင်သူ အကုန်ယူ (FPTP) စနစ်ကိုပဲ ဆက်လက် ကျင့်သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တယ်။ လွှတ်တော်မှာ မွန်ဒေသလုံး ဆိုင်ရင် ဒီမို်ကရေစီ ပါတီ အနေနဲ့ ဘာကြောင့် ပီအာကို ကန့်ကွက် တာလဲ ?
ဖြေ။ ။ FPTP စနစ်ကို အစ ကတည်းက ထောက်ခံ ထားပြီးသား ဖြစ်တယ်။ ပီအာ ကိုလည်း အဆို တင်သွင်း ကတည်းက လုံးဝ ကန့်ကွက်တယ်။ (ပီအာ အကြောင်း ဆွေးနွေးစဉ် လွှတ်တော် မတတ်ဘဲ သပိတ် မှောက်သည်) လွှတ်တော် အစည်း အဝေး မတက်ဘူး။ ပြည်သူ လူထု တွေနဲ့လည်း ဒီစနစ်နဲ့ ပိုနီး စပ်တယ်။ ပြီးတော့ ကျမတို့ နုုိင်ငံ မှာလည်း လွှတ်တော်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဝေးကွာနေတာ အနှစ် (၅၀) ကျော်ခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်။ မဲပေး တာနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့နော် PR စနစ် ဆိုရင် အသစ် ပြန်ရှင်းပြ ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။ အခက်အခဲလည်း ရှိနိုင်တယ်။ ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ရင့်ကျက် လာမယ်၊ ပြည်သူ လူထုတွေ အတွက်လည်း မဲပေး စနစ်ကို ဒီထက် ပိုပွင့်လင်း လာမယ် ဆိုရင် ဘယ်စနစ်ပဲ သုံးသုံး ပေါ့နော်။ နောက်ပြီး ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံး ဖို့လည်း စဉ်းစားဖို့ လိုတယ်။
မေး။ ။ NLD ပါတီနဲ့ တပ်မတော် ကရော FPTP စနစ်ကို ဘာကြောင့် ထောက်ခံ တာလဲလို့ ထင်လဲ?
ဖြေ။ ။NLD ပါတီကဆိုရင် FPTP စနစ်ကို ကျင့်သုံးမယ် ဆိုရင် ၂၀၁၂ ကလို မဲနိုင် လိမ့်မယ် ယုံကြည် ထားတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ နိုင်လို့ သမ္မတ ဖြစ်ရင်လည်း ကျမတို့ုိ တိုင်းရင်းသား တွေအတွက် ဘာအကျိုးမှ မရှိနိုင် ဘူးလို့ မြင်တယ်။ တပ်မတော် ဘက်ကတော့ ပီအာစနစ်ကို ပြည်သူ လူထုက မရှင်း သေးသည့်အတွက် ကန့်ကွက်တာ ဖြစ်တယ်။၂၀၂၀-၂၅ ကျရင်တော့ ပီအာ စနစ်ကို ပြည်သူလူထုတွေ နားလည် လာလိမ့် မယ်လို့ ထင်တာ ပေါ့နော်။
မေး။ ။၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှာ တပ်မတော်က ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါနေတယ်။ ပီအာ စနစ်ကို ကျင့်သုံးမယ် ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည် ပြင်ဆင် ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တပ်မတော်က FPTP ကို ထောက်ခံ လိုက်တယ်လို့ ကြားတယ်။
ဘယ်လို ထင်ပါသလဲ ?
ဖြေ ။ ။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ထဲမှာ ဆိုရင် တကယ့် ပီအာကို ကျင့်သုံးမယ် ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံကို သေချာပေါက် ပြင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ပီအာ စနစ်ကို အဆိုပြု ကတည်းက အဲဒီ စနစ်ထဲမှာ အချက်အလက် အချို့ကို တင်ထားတာ ဖြစ်တယ်၊ ရောထားတယ်၊ တကယ့် ပီအာ စနစ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း အားလုံးကို သုံးထားတာ မဟုတ်ဘူး။
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ မွန်ဒီမိုကရေစီ ပါတီ၏ မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် မဲဆန္ဒ နယ်မြေမှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် မိမြင့်သန်းနှင့် ဟင်္သာ မီဒီယာမှ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ချက်အား တင်ပြ ခဲ့ဖြင်း ဖြစ်သည်။
ယခင်ဆောင်းပါးစာတစ်ရွက်နှင့် အပြည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် ခဲ့စဉ်